Beautiful Cities hitsidika tany Aotrisy sy Italia By Rail | Save A Train
Home > Travel Europe > Beautiful Cities hitsidika tany Aotrisy sy Italia By Rail
Beautiful Cities hitsidika tany Aotrisy sy Italia By Rail
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby any Italia, Travel Europe
Miaraka maro mombamomba avo, besinimaro firenena tahaka an'i Frantsa, Alemaina, ary Soisa, Tsy mahagaga raha Aotrisy tsy mbola mahazo betsaka ny saina! Ok, Italia tena lavo na oviana na oviana intsony ny sari-tany, fa ny fiaran-dalamby lalana avy any Aotrisy ho any Italia antoka dia tsinontsinona. fa, izany ny hanova! Aotrisy sy Italia ny fiarandalamby dia iray amin'ireo indrindra mahagaga traikefa ianao ve mahazo nitory.
Noho ny quaint tendrombohitra zana-bohiny, mesmerizing voajanahary attractions, ary ny tanàna malaza maritrano, ianao hahazo ny mahagaga Eoropa fitetezam-paritra. Trains in Austria are among indrindra nandroso rehetra Eoropa, alina fiarandalamby any ambony endrika (fa momba izay ihany, alina fiaran-dalamby rehetra mitovy làlana tahaka ny andro fiarandalamby manao), tena tsy mila mandroso mampino famandrihan-toerana ary mahazo aina!
Noho izany, aza miandry intsony: manomboka trandrahana Aotrisy sy Italia ny lalamby amin'ny alalan'ny fitsidihana ireo tanàna tsara tarehy:
Manomboka ny Aotrisy sy Italia ny fiarandalamby dia niaraka tamin'ny Vienne
Manomboka ny Aotrisy sy Italia ny rail hiemponempona ny nanamarina ny voninahitra avy Aotrisy renivohitra voalohany. Vienna oozes tantara, hatsarany ary tsy hay hazavaina tsara tarehy!
Very hahavonto ny Aotrisy ny tranombakoka amin'ny andro, manandrana nentim-paharazana Vienna kafe ary Sachertorte izay Ho hitsoka ny sainao! Jereo Vienna ny fotoana favoris rehetra-toy ny Vienna State Opera sy Schonbrunn Palace (izy ireo ny tsy maintsy tanteraka-mahita!). Arakaraka ny fiarandalamby lalana tianao ny haka, na mankanesa any Salzburg sy Hallstatt mahitsy na lohany mankany Graz.
Mankanesa any Graz
Koa satria Vienne-Graz manana mivantana lalamby, mijanona any Graz sy Klagenfurt amin'izay lalan-kalehanareo avy any Vienne ho any Venice. Aza miala Graz tsy nitsidika ny Schlossberg. Izany no iray havoana eo afovoan'ny an-tanàna malaza fantatra amin'ny famantaranandro sy tilikambo ho fiarovana mafy. Raha tafiditra ianao Salama tsara, miakatra ny tohatra avy amin'i Schlossbergplatz na ampiasao fotsiny ny fiakarana. Just akaikin'ny amin'ny Schlossbergplatz no manan-tantara Kastner e Ohler fiantsenana afovoany - jereo ny efitrano fandraisam-bahiny.
Mandehana any amin'ny peo, mandeha amin'ny arabe afovoan-tanàna, ary andramo iray amin'ireo tsara indrindra ranomandry-menaka mandrakizay! “Ice Geissler” in Sporgasse mamokatra organika gilasy izay maro be tonga amin'ny tsirony ary faran'izay matsiro! Ny Aotrisy sy Italia ny fiarandalamby dia mijery lavitra niakatra teny an-minitra, tsy izany?
Our next stop in Austria and Italy By Rail is Venice, Rehefa tonga Italia, ianao niditra tao amin'ny tany gorgeousness! Accommodation in Venice dia tena lafo, ka dia miasa ao amin'ny famindram-po raha mitoetra ho iray andro. Aza mandany fotoana, fa hanao araka izay azo atao ao amin'ity vanim-potoana fohy. A gondola sambo fitetezam-paritra dia tsy maintsy! FYI, dia tena lafo ihany koa. Manantena ny vola momba ny 80 EUR mandritra ny 30 minitra gondola fitetezam-paritra sy ny 120 EUR ho 45 iray minitra. dia, mandeha jereo Ponte von Rialto - iray amin'ireo indrindra malaza tetezana in Venice. Izany sakan'ny ny Grand Canal, ary dia akaiky ny Ponte von Rialto. Mandehana any amin'ny gara, hatsaran'ny ao amin'ny Tena tsara tarehy Piazza San Marco, antsoina Saint Mark ny Square.
Bolzano ho any Venice Lamasinina
Vienna ho any Venice Lamasinina
Udine ho any Venice Lamasinina
Ary hamarana ny Aotrisy sy Italia By Rail amin'ny Florence
Amin'ny Aotrisy sy Italia ny lalamby fitetezam-paritra, ianao dia mety mijanona in Florence. Iray na roa andro teto amin'ity tanàna ity feno ara-tantara, kanto, ary majika madio ny dikany ara-pivavahana. Ny zavatra voalohany dia ny mahita ny Basilica Santa sy ny Cloisters an'i Maria Novella. Sy be voninahitra izy ireo teo akaikin'ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby! Misy ihany koa ny tsara tarehy Piazza teo izay saika feno olona foana. dia, mifindra tao Santa Maria ny asa lehibe do Fiore sy ny be dome. Jereo ny Basilica Santa Croce sy ny Basilica San Lorenzo de Medici trano fiangonana ary koa.
Makà fiatoana avy any Aotrisy sy Italia Noho ny fitsidihan'ny Rail sy loha tsy mahazo manao amin'ny San Lorenzo Market ho haingana sy sakafo matsiro! Ity tsena no an-toerana 'toerana tena toerana ny miantsena sy sakafo maivana! Noho izany, angamba mividy olona fahatsiarovana manenjika anareo Te nahafinaritra ny sakafo antoandro? Eny! Aza miala Florence tsy nitsidika ny Uffizi, ny Accademia, ny Palazzo Vecchio, ary ny Pitti Palace. Ireo no tranombakoka lehibe tao an-tanàna. koa, hamangy ny mifanila Boboli Gardens, ny zaridaina tsara tarehy indrindra ho hitanao mandrakizay.
Ny fijanonana manaraka dia Roma. tsara, fantatrao izay tokony hatao any ... ka raha tsy hijerena ny Italia Pinterest zana-kazo.
Bologna ho any Florence Lamasinina
Livorno ho any Florence Lamasinina
Ravenna ho any Florence Lamasinina
Fa ny tena mahagaga Aotrisy sy Italia ny lalamby traikefa, Login to Save A fiaran-dalamby fa ny haingana indrindra sy ny teti-bola-namana fomba hahazoana ny saran-dalana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcities-austria-italy-rail%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#travelaustria Train Travel fiaran-dalamby nankany travelaustria travelitaly
Train Travel China, Fiaran-dalamby any Italia, Train Travel Russia, Travel Europe, Travel Etazonia